Kianja filalaovam-baolina : nambolena fandrotrarana i Mahamasina | NewsMada
Par Taratra sur 15/02/2016
Nanomboka ny talata 9 febroary lasa teo ny fambolena bozaka tao amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Araka ny nambaran-dRasoanaivo Charly, tomponandraikitra misahana izany, bozaka fandrotrarana gasy ihany no novolena eo aminy. Mitovy karazana amin’ilay bozaka “green” avy atsy Afrika Atsimo, ihany izy io, fa ny fikarakarana azy ihany ny mahatsara sy maharatsy azy, fa ny azo antoka aloha fa tsara ny fivoakany.
Mialoha ny nanatsatohana ireo bozaka nefa mbola nakarina 5 – 7 cm teo ho eo ny sakan’ny kianja, avy eo nasiana karazana zezika anankiroa ary ireo bozaka kosa, mbola nalona tao anatin’ny ranona tain’omby, miaraka amin’ny fanafody mampaniry azy tsara. Taorian’izay, nanao ny fampitoviana tantana na “nivellement”. Tsy atahorana hanangon-drano ihany koa ny kianja satria efa nisy ny fanamboarana ireo fantsona famoahan-drano lehibe ao ambanin’ny kianja.
Nahatsara ny fambolena koa ny toetr’andro ka inoana fa hivoaka araka ny hieverana azy ny faniriny, araka ny fanambaran’ity teknisianina ity hatrany.
Raha ny vinavinana, ny faran’ny volana marsa ho avy izao, no ho vita tanteraka ny kianja ary afaka handray lalao, manomboka ny volana avrily. Na izany aza, fepetra ny mba tsy hanaovana fihaonana betsaka loatra. Efa misy ny fiaraha-miasan’ny kaominina amin’ny federasion’ny baolina kitra sy ny rugby, amin’ny famatsiana fitaovana sy fikojakojana azy, mba hampaharitra ny hatsaran’ny bozaka hilalaovana.